Artistan’i Anishinaabe namorona emoji Nosy Sokatra ho fankalazana ny iray Volan’ny Tantaran’ny Tompotany ao Kanadà · Global Voices teny Malagasy
"Manana tantara manokana ny isaky ny firenena, isaky ny vondro-teny, isaky ny foko, ny olona tompotany tsirairay..."
Voadika ny 12 Jona 2018 7:25 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Italiano, Español, عربي, English
Mbola GIF mampiseho izay tenirohy manokatra ny hidin-tranon'ny emoji Nosy Sokatra, noforonin'ny Chief Lady Bird. Tao amin'ny Twitter Canada
Afaka mampiasa emoji namboarina manokana mandritra ny volana Jiona ireo mpisera Twitter Kanadiana mba hanamarihana ny Volan'ny Tantaram-Pirenena Tompotany. Noforonin'ilay mpanakanato Anishinaabe, Chief Lady Bird, mampiseho sokatra sy hazo ilay emoji ary masoandro maneho ny “Nosy Sokatra,” (Turtle Island) izay anaran'ny kaontinanta Amerika Avaratra amin'ny teny Anglisy araka ny fandikan-teny avy amin'ny tenindrazana tompotany marobe.
Nizara ny heviny ambadiky ny famoronana tamin'ny andiana sioka i Chief Lady Bird. Nilaza izy fa nanao izay hanangonan-kevitra voalohany avy amin'ireo mpikambana hafa ao amin'ny Firenena Voalohany tao amin'ny Twitter noho ny fanamby apetraky ny fitadiavana sary mifanaraka amin'ny fahasamihafan'ny vondrom-piarahamonina manerana ny firenena.
Alohan'ny nanombohako namorona ny emoji, te hahazo antoka aho fa misy ny fakàn-kevitra avy amin'ny vondrom-piarahamonina sasany. Satria natao haneho ny vondrom-piarahamonintsika ity sary ity, tsy te hiresaka amin'ny anaran'ny olona aho. Te hitondra ny fomba fijery iombonana ho velona aho.
Na dia somary kely aza ny fe-potoana, niditra Twitter, Instagram sy Facebook aho mba hanangona toro-hevitra momba ny endriky ny emoji! Mifototra amin'ireo vaovao voaraiko, nanangana latsa-bato ofisialy tao amin'ny Twitter ahitana ireo safidy efatra malaza indrindra aho.
Tsara ny manamarika fa tsy mino aho fa afaka maneho ny hamaroana sy hadadasiky ny vahoaka tompotany ny marika iray. Manana tantara miavaka ny firenena tsirairay, ny vondrona fiteny tsirairay, ny foko tsirairay avy, ny olona tompotany tsirairay avy ary tsy rariny ny mampiditra anay ao anatin'ny sokajy tokana.
Avy amin'ny latsa-bato ofisialy tao amin'ny Twitter ny fanapahan-kevitra farany hamorona ny emoji Nosy Sokatra (vato 1,727- 50% ho an'ny nosy sokatra) ary ny zava-misy fa fomba fijery manaisotra ny fananjahantany ao amin'ny kaontinanta antsika rehetra ny nosy sokatra.
Manome voninahitra ny fifandraisantsika amin'i Neny Tany ihany koa ny emoji, ary koa ny tantaran'ny famoronana Anishinaabe izay ahitana voalavo manao sorona ny tenany milomano amin'ny rano lalina ary mitondra vovoka mba hibaby sokatra, mba hanome fiainana sy sakafo ho an'ny zavaboary rehetra
Amin'ny maha-mpanakanto Anishinaabe, mitandrina aho mba tsy haka ny avy amin'ny firenena hafa ho ahy, satria fantatro fa masina loatra ny endrikay sy ny tantaranay. Tena manandram-peo amin'ny resaka fakana ho an'ny tena ny kolontsaina aho ary tiako tanterahana izay lazaiko.
Nisy fifanakalozan-kevitra maro nahafinaritra nandritra ny dingana famoronana, izay tena ankasitrahako tokoa. Iray amin'ireo ahiahy lehibe indrindra ny hoe tsy naneho ny Inuit ny fampisafidianako – fa tsy naninona. Saingy tsy mahatsapa velively manan-jo hampiasa saimbôly tsy mazava amiko aho.
Azo “sokafana” ny emoji amin'ny fampiasana ny tenirohy mifandraika #IndigenousHistoryMonth, #IndigenousPeoplesDay, #FirstNations, #Metis, #Métis, sy #Inuit. Izany no vokatry ny fiarahamiasa amin'ny Twitter Canada, izay hitan'i Chief Lady Bird fa toy ny teboka fanombohana amin'ny fiarahamiasa hoavy:
Ohatra: noforonin'ny mpanakanto Anishinaabe ny marika tamin'ity taona ity (nomem-boninahitra sy falifaly loatra aho! Mihoatra ny tena zava-misy izany!) Ary amin'ny taona manaraka dia mety ho mpanakanto Inuit, ary ny taona manaraka indray dia mety ho mpanakanto Haudenosaunee ary avy eo Métis ary avy eo Mikmaq sns. sns
Misy ny tanjon'ity tetikasa ity mba hivelatra amin'ny zavatra lehibe kokoa izay afaka mankatoa ny fihaonan'ny fanondroana mahatompotany, ary faly aho mahita ny toerana misy azy!
Chi miigwech (misaotra) ny rehetra noho ny fanohananareo hatrany! Saingy misaotra indrindra anao noho ny fahitsianao. Noho ny fihazonana ny olona ho tompon'andraikitra. Noho ny fiarovana ny fanehoana ara-drariny ny ara-kolontsaina. Zava-dehibe io asa io ary tsy vita irery. Mahafinaritra ny #NativeTwitter